Lonozinti ungumholi woqobo | News24
Lonozinti ungumholi woqobo
UMoneeb Josephs osethengwe Amazulu.PHOTO: sourced
KUNGENZEKA iningi labalandeli bebhola beselicabanga ukuthi ikusasa likanozinti wodumo nowumakade ayebona uMoeneeb Josephs beseliphelile.
Ukuza kuka Josephs eThekwini nokuthengwa AmaZulu kuchaza lukhulu ngalonozinti.
Okunye okufike kusho okuningi ngalesikhokho sikanozinti ukuthola ukuthi akulona kuphela Usuthu olukade lumfuna kodwa mathathu akade emgaqele. Amathimu afana no Cape Town City, Ajax Cape Town kanye ne SuperSport United abanye abakade bezama inhlanhla kuye.
Nokho ukukhetha kwakhe ukuqoma uSuthu kune wubuhlakani kuka Josephs ngoba mhlawumbe ukube ubeke waya kwenye ithimu ubengabangiswa ijezi.
Iqembu lika Josephs elidala iBidvest Wits selikuqinisekile ukuthi unozinto wabo omdala usejoyine iqembu laseThekwini. Ukujoyina kwalonozinti oSuthwini kusho lukhulu kulekilabhu futhi uzosiza kakhulu ngoba phela akezi nethalente kuphela kodwa isipiliyoni sakhe sizokwakha abaningi kanti neqembu uzolibeka kwelinye izinga. Futhi-ke uJosephs uyaziwa ngendlela akhuluma ngayo uma esemapalini kanti uba wusizo olukhulu kubadlali basemuva nabaphambi kwakhe.
Emasontshweni ambalwa edlule uJosephs uhlanganise iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili (38), kanti lokho akuchazi lutho kodwa ulwazi olunzulu ngepali nangebhola laseMzansi.
Umqeqeshi woSuthu uCavin Johnson uthi ukufika kuka Josephs, odume ngekati eliwumaqwe (Slim Kat) eqenjini lakhe kuzosiza kakhulu futhi uyakuncoma. UJohnson uthi iningi labantu abazi ukuthi lonozinti akekho nje mnkantsha bomvu kodwa ubuye abe wumholi uma sekudlalwa.
“Uma sekunzima nomdlalo ushisa bhe, uJosephs uyakwazi ukupholisa ozakwabo nokubanika amacebo.
Okunye engikuthandayo ngaye ukuthi uyakwazi ukuhlela izinto emuva,”kusho lolqeqeshi.
UJosephs umakade ayebona ngempela, Waqala ukudlala kwiCape Town Spurs esefadalala eneminyaka eyishumi nesikhombisa (17) ngo 1997. Wasuka lapho waya kwiAjax Cape Towns Nalapho akhulela khona wahlala iminyaka eyisikhombiza ngaphambi kokuza eJozi (eGoli)nalapho ajoyina khona iBidvest Wits. Emva kokodlalisa kweqhawe kwiWits Wagcina esetshontshwe yiOrlando Pirates amasizini ambalwa kodwa wabuye wabuyela emndenini wakhe omdala, kwiWits.
“EMilpark, nalapho kuyisizinda nekhaya leBidvest Wits kumnandi kakhulu futhi kufana nasekhaya.
Kahle kahle ambalwa amaqembu afana neWits eMzansi wonke, leliqembu lifana nomndeni omncane kodwa ojabulile, nobumbene kanye nonakekela wonke amalungu omndeni,” kusho uJosephs.